Bankiga Adduunka ayaa ku deeqay $55 million oo lagu kabayo miisaaniyada dowlada ee ku… – Hagaag.com
Bankiga Adduunka ayaa ku deeqay $55 million oo lagu kabayo miisaaniyada dowlada ee ku…
Wasiirka Maaliyadda Somaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu faah faahiyay Bankiga Adduunka, oo Dowladda Federaalka ugu deeqay 55 milyan oo dollar.
Bankiga Adduunka ayaa lacagtan kaga caawinaya Dowladda Federaalka miisaaniyadeeda, ka dib markii uu dalka saameeyay cudurka COVID-19.
Wasiirka Maaliyadda oo shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa ayaa yiri “Waxaa maanta la ansixiyay kabkii miisaaniyadeed ee dalkan lagu kabaayay ee Baanka Adduunka uu ku kabaayay, oo shan iyo konton milyan ah. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay habka uu inoola shaqeeyay adduunku, gaar ahaana Bankiga Adduunka iyo Hay’adda Lacagta Adduunka (IMF).”
“Lacagtan waxay ka mid tahay waxyaabihii wanaagsanaa ee ka soo baxay deyn cafintii iyo shaqadii aan soo galnay ee dheereed ayay ka tarjumeysaa. Waxaa weeyaan wax dalkoo dhan ka dhaxeeya shan iyo kontonka milyan, Dowladda Federaalka ha ahaato ama dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka. Intaas ay tahay waxaa ay ku xiran tahayna waxaa weeyaan hoos u dhicii miisaaniyadda ee xanuunkan inkaarta qaba uu keenay daqliga hoos u dhacay, caawimo ay kabeyso weeye ama kab ah.”
“Runtii aad baan ugu faraxsanahay, waan ka soo shaqeynay, waa la soo shaqeynay, waxaan isla garanay markaa, kabka loo baahan yahay intaa inuu yahay iminka. Hadana dhawaan waan ku noqon doonnaa, iyadoo la eegaayo habka COVID-19 ay u socoto. Waxay noo ballanqaadeen intaan sidaa u socono ee aan habkaa wadnaba Bankiga Adduunka, Afrika, IMF-ta iyo Midowga Yurub ay na daba jooggaan, afartaasaa ugu waaweyn.”
“Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegeynaa inaan arrimahaa aad uga shaqeynayno, oo aan dooneyno in si fiican loo hana qaado. Waxaana ku tala jirnay waxaa weeyaan intii aan xanuunkani inoo imaanin inaan isku filnaansho gaarno, oo xaqiiqdii inagu aan ku filnaan karno qarashka dowladdan lagu qarash-gareynayo inaan ku filnaan karno, haataana taasaa madaxayaga ku jirta.”